WWE News: ny tsy fahaizan'ny fitafiana an'i Sasha Banks dia mamoaka RAW amin'ny rivotra - Wwe
WWE News: ny tsy fahaizan'ny fitafiana an'i Sasha Banks dia mamoaka RAW amin'ny rivotra
Ny RAW omaly alina dia nahita an'i Sasha Banks nahazo tombam-bidy alohan'ny lalao Tompondakan'ny RAW vehivavy nifanandrina tamin'i Ronda Rousey tamin'ny hetsika Royal Rumble tamin'ny fandresena ilay tompon-daka tamin'ny alàlan'ny fandefasana an'i Natalya tamin'ny Tag Team Match.
Na izany aza, kivy ny mpijery sasany rehefa hita fa 'olana ara-teknika' no namono ny sakafo ary namela azy ireo tamin'ny tabilao mainty vonjimaika. Fantatra ankehitriny fa ny tsy fanao amin'ny fitafiana izay nahita an'i Sasha Banks naseho vonjimaika dia nitarika fanidiana niniana nataon'ny ekipa mpamokatra WWE.
Ny WWE RAW tamin'ity herinandro ity dia natao tao amin'ny Chesapeake Energy Arena any Oklahoma City, ary hetsika lehibe iray no nahitana ny ekipan'i Sasha Banks sy i Bayley niady tamin'ny Tompondakan'ny RAW vehivavy Ronda Rousey sy Natalya tamin'ny hetsika ekipa niatrika ny fifandonan'i Banks sy Rousey teo amin'ny Royal Mikotrana.
Sahiran-tsaina ny mpijery USA Network satria lasa mainty nandritra ny segondra vitsy ny écran raha niady tamin'i Natalya i Sasha Banks, saingy neken'ny besinimaro fa lesoka ara-teknika fotsiny io satria niverina tampoka teo ireo sary.
Raha tavela tao anaty maizina ny mpijery USA Network noho ny reflexes fohy avy amin'ny ekipa mpamokatra WWE mba hitsimbinana ny varotra Banky ary hitazona ny vokatra PG, mpijery marobe tany ivelan'i Amerika Avaratra no nahita ny fotoana naharatsy azy rehetra - miaraka amin'ireo vatan'i Banks nidina hamela azy hita miharihary eo anoloan'ny WWE Universe iray manontolo.
Mampihomehy, Sasha Banks dia manambady an'i Sarath Ton, izay mamorona peratra fanamoriana ho an'ny ankamaroan'ny Superstar WWE. Ny ekipa mpamokatra WWE sy ny Banky dia samy nanaloka haingana ny lesoka, niaraka tamin'ny efijery mainty ary nisintona ny vatan-kazo avy hatrany ny The Boss.
Azonao atao ny mahita ny tsy fetezana ao amin'ilay clip mifandraika etsy ambany. Banky dia nanana zavatra teo ambanin'ny teritery, saingy fitaovana tena izy io. WWE dia mbola nanapa-kevitra ny hanapaka ilay horonantsary nandritra ny segondra vitsy satria nandefa mivantana RAW tamina fahatarana kely ry zareo.
Na dia tsy hamoaka ny tsy fetezanay aza izahay dia afaka mahita ny zava-nitranga tamin'ny alàlan'ny H Jenkins avy amin'ny Ringside News Eto.
Sasha Banks dia handray an'i Ronda Rousey amin'ny Tompondakan'ny Vehivavy WWE RAW ao amin'ny Royal Rumble amin'ny 27 Janoary.
Voamarikao ve ny efijery mainty amin'ny RAW? Ampahafantaro anay ireo hevitra.
ahoana no ahazoan'i mrbeast ny volany
inona no hataonao rehefa mankaleo ianao
john cena azonao antoka ve izany gif izany
ny fomba fandaozana lehilahy narcissistic